Muxuu Bing ugu guuleystey raadinta fiidiyow ee Google | Martech Zone
Sabtida, Juun 13, 2009 Axad, Agoosto 23, 2009 Douglas Karr
Google waxaa laga yaabaa inay xoogaa fiiro gaar ah u siiso qoraalka. Fiiri farqiga adag ee u dhexeeya Natiijooyinka raadinta fiidiyowga ee Google iyo Natiijooyinka raadinta fiidiyowga ee Bing. Inta badan ma siinayo Microsoft amaahda waaxda adeegsiga - laakiin way qodbeen kan!
Natiijooyinka Raadinta Fiidiyowga Google
Natiijooyinka Raadinta Fiidiyowga Bing
Ciyaaryahan Bing Video Search
Halkan waxaa ku soo koobaya astaamaha muhiimka ah ee Bing Video Search oo ku saabsan Google Video Search:
Markaad ka wareejiso Bing, fiidiyowgu wuxuu si toos ah ugu shaqeynayaa dhawaaq. Google wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka boodo waxyaabaha ku jira - laakiin kaliya ka dib markaad gujiso si aad ugu ciyaarto fiidiyowga qaabkooda.
Bing waxay bixisaa horudhac balaaran oo shaashadda dhabta ah marka loo eego Google - oo ku tiirsan qoraalka si aan loo baahnayn. Fiidiyowgu waa dhexdhexaad muuqaal ah, Bing ayaa sii deynaya in laga hormariyo. Waad ka wareejin kartaa cinwaanka Bing si aad u hesho cinwaanka buuxa haddii la gooyey.
Markaad ku ciyaareyso fiidiyowga Bing, waxay ku dhowdahay baaxadda bogga… cajiib ah - gaar ahaan waxyaabaha cusub ee qeexitaanka sare. Fiidiyowyada kale wali way kuxiran yihiin hoosta oo wali waa la istusi karaa markii aad dul marto dusha sare.
Hoos u dhigida xulashadaada raadinta waa mid fudud oo caqli gal ku ah dhinaca bidix ee Bing. Google wuxuu kaaga baahan yahay inaad gujiso Advanced Video Search si aad uhesho isla xulashooyinka shaandhaynta.
Google ma sameyso bogagga ugu quruxda badan ama ugu qurxoon, laakiin boggooda Natiijooyinka Raadinta Fiidiyowga ayaa ah mid aan la maarayn karin oo fool xun. Aniga aragtidayda, Bing wuxuu qabtay shaqo aad ufiican asaga oo dhigaya bogga kana dhigaya mid la isticmaali karo. Raadinta fiidiyowgu way adag tahay - iyo algorithms-yada ma ahan kuwa ugu weyn… waxaad u badan tahay inaad ku soo booddo waxyaabo badan. Isdhexgalka Bing iyo adeegsiga ayaa sahlaya in la raadiyo, la daalaco oo la helo fiidiyaha aad raadineyso.
Tags: aangleadalvibeddelka b2bwax ku ool ahdanfahrnerxikmad